Dating apps ziyaqhubeka zikhula eSpain | Bezzia
Dating apps ziyaqhubeka zikhula eSpain
UMaria vazquez | 22/06/2022 10:00 | yokuPhila
General dating app downloads ikhule ngama-32% ekuqaleni kwalo nyaka ka-2022. Ucalucalulo malunga nala maphepha luye lwehla kwaye abantu abaninzi babona ezi zicelo njengenye indlela yokudibana nomntu.
Uninzi lwala maphepha asebenza phantsi i-accelerated dynamics apho kwanele khona ukutyibilikisa ubhontsi wakho kwiscreen ukusuka ekhohlo ukuya ekunene ukukhetha idinga elilandelayo. Abanye banesigqi esikhululekile, bakhethe iiprofayili eziqinisekisiweyo kunye neqela labantu eliphendula emva kwesikrini.
Ubusazi na ukuba thina bantu baseSpain singabo wesithathu kuluhlu ukusetyenziswa online ukuthandana ii-portals kunye nezicelo? Sigqithwa kuphela yi-United States kunye neBrazil kwirenki, esibeka entloko eYurophu ekusebenziseni ii-apps zokuthandana. Kodwa, zinjani ezi zicelo kwaye zeziphi ezona zidumileyo eSpain?
1 Yabo bonke
2 Eyona idumileyo eSpain
El Ukunyuka kwabemi ababodwa, leyo, ngokwedatha evela kwiZiko leSizwe leNkcazo, isuke kwi-36% ngo-2019 ukuya kwi-40% ngo-2021, kwaye ixhatshazwa yimarike yesicelo ekukhangekeni rhoqo kwee-niches zokuvelisa apho inokunika khona iinkonzo zayo.
Kwaye kungekuphela kwi-niches yokuvelisa, ezi zicelo zisebenzisa ezinye iintlobo ze niches ngokomdla, iintlanga kunye neenkolo. Namhlanje kukho izicelo zokuthandana kumntu wonke, nangona xa sishiya eyona nto idumileyo sinokufumana ukunqongophala kwabasebenzisi.
Njengoko sele sichazile, uninzi lwezi apps zisebenza phantsi kwee-dynamics ezikhawulezileyo apho kwanele ukuba swayipha ubhontsi wakho ngapha kwesikrini ukukhetha idinga elilandelayo. Sithetha, umzekelo, malunga nezicelo ezifana ne-Tinder okanye i-Bumble, apho ngumfazi omele enze intshukumo yokuqala.
Ngakolunye uhlangothi, olunye uhlobo lwe-apss luzenza ngathi lukhululekile kunye neendawo ezinobungane. Ezi zijolise ngokubanzi kwii-niches ezikhethekileyo, njengoko kunjalo, umzekelo, i-Ourtime, igxile kwabo bangaphezulu kweminyaka engama-50 ubudala. apha i ukukhethwa kwabagqatswa inikezelwa ngokobudlelwane emva kokuphendula i-questionnaire enzima kakhulu kwaye zonke iiprofayili ziqinisekisiwe, oko kukuthi isicelo siqinisekisa ukuba umntu omelwe kwiprofayili yedijithali uhambelana nomntu wehlabathi lokwenene.
Kukho ii-aps apho abasebenzisi bajonge ikakhulu ukudibana okungaqhelekanga okanye ngokwesondo kunye nezinye apho ubudlelwane bubekwe phambili. Okudume kakhulu, nangona kunjalo, phendula kuzo zonke ezi profayile, ngaloo ndlela iquka iindidi ezininzi zabasebenzisi.
Eyona idumileyo eSpain
Edarling kunye neMeetic Zisengawona masango atyelelwa kakhulu eSpain. Zombini zisekelwe kwimatchmaking ukucebisa amaqabane, ukunceda ufumane abantu abanxulumene ngokwasengqondweni kwaye ehambelanayo. Ndiqinisekile ukuba uya kusazi isilogeni sokuqala: kufunwa abantu abangabodwa.
Eyesibini, i-Meetic, yeyeqela leMatch elilawula isithuba sokuthandana kunye ne-apps ezifana ne-Tinder, i-Hinge, i-Intanty of Fish, OK Cupid, ixesha lethu okanye umdlalo. Phakathi kwezi yingxubuwa yeyona ithandwa kakhulu, ukuba phakathi phezulu 3 kakhulu ethandwa ukuthandana apps kumazwe ezahlukeneyo njengoko US, UK, Germany, France, Spain and Italy.
Ngokoqikelelo olwahlukeneyo, Iqela leMatch libalelwa ngaphezulu kwe-56% yokhutshelo lulonke lwe-app yokuthandana, ilandelwa liqela leMagicLab, elingabanini. bumble and badoo, enye yezona zithandwa kakhulu ukuthandana izicelo eSpain.
Ukuba ufuna ukudibana nabantu abanomdla ofanayo kwindawo yakho, yenza abahlobo okanye ujonge ubudlelwane, ezi zicelo zokuthandana zi enye indlela yedijithali kwezo ezinye iindlela zemveli kunye nobuso ngobuso zokwenza izinto. Funda iinkcazo zabo, ubhalisele isibini sabo kwaye uzame.
Khumbula ukuba ukudibana nabantu ngale ndlela kunokuba yirhafu kakhulu. Kuthatha ixesha ukukhangela ukufumana iiprofayili ezifanayo ze-priori, ezingasingenisi ngokubona kuphela kodwa ngento abayithethayo. Kwakhona, xa befunyenwe, abasoloko benosukelo olufanayo nolwethu. Ukuba injongo yethu ingqale, inokubangela unxunguphalo ukuqhubeka nenqanaba elinye.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » yokuPhila » Dating apps ziyaqhubeka zikhula eSpain
I-Body Mist: yintoni, indlela yokuyisebenzisa kunye nokunye okuninzi
Yintoni omawuyenze ukuyeka ukucinga ngeqabane langaphambili